အသက် ၂၀ - ညစ်ညမ်းဝတ်မှုန်ကူးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် - ပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်ခြင်း - သင်၏ Brain On Porn
အသက် (၂၀) ​​- ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သနည်း
သူတို့အလွန်အမင်းတက် messed နေကြတယ်, ငါသည်ငါ့ရုန်းကန်မှုများကိုမျှဝေချင်ပါတယ်, ငါသည်သင်သတိပေးကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ရိုးသားချင်ငါသည်ဤအကြောင်းကိုစကားပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်များကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။
ငါတစျခုလုံးကိုကမ်ဘာပျေါတှငျငှက်ကလေးအများစုအံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှစက်တင်ဘာအတွင်းလက်ထပ်တယ်။ သူမသည် 23 သည်နှင့်ငါ 20 ဖြစ်၏။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မပတ်ပတ်လည်အရူးလုပ်ဖူးပေမယ့်ကျနော်တို့အပြည့်အဝလိင်ရှိသည်ဖို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဒါလှပခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါသူမ၏အလွန်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးခဲ့, ငါဒါစိတ်လှုပ်ရှားပေမယ့်မင်္ဂလာဆောင်ညကအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။
မင်းကိုဘာကြောင့်ထိတ်လန့်စေမလဲ ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေတယ် ပိုပိုပြီး။
အဲဒါဟာအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ထိတွေ့မှုတစ်လျှောက်လုံးငါပုံမှန်စောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ။ ငါကျပန်းဗွီဒီယိုများ၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အလှမ်းဝေးနေသည်။ ငါကဒါမဟုတ်ခဲ့သိတယ်, ငါနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒါငါထင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောပြသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ထိုစဉ်ကစေ့စပ်ထားသူနှင့်ငါစောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လက်ထပ်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်ပြီးပျော်ရွှင်စွာအတူတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေ ၀ င်ချိန်သို့စီးသွားမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
လက်ထပ်ပွဲမတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါတောင်မှမယုံနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုလဲကျမိတဲ့အခါညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတယ်။ (ဒါအရူးအပိုင်းပဲ)
ငါစပြီးကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖွင့်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ငါသဘောပေါက်လာသည်။ မင်းသမီးသည်ကျွန်ုပ်စေ့စပ်ထားသည့်ညီမလေးနှင့်တူသည်။ ဗွီဒီယိုတွေပြောင်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပေမယ့်တစ်စုံတစ်ရာကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွားစေခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်, ဒါကပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အစဉ်မပြတ်ငါနှမနှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျး (သူမအချိန် 17 ခဲ့) ရှိခဲ့ပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှ, ငါဘယ်တော့မှကျိန်ဆိုမီကြောင်းလမ်းအတွက်သူမ၏မြင်ခဲ့ပြီးသောစိတ်ကိုထားပါ။ ဤဗီဒီယိုအားကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကြည့်လိုက်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါဟာထပ်မံမစဉ်းစားတော့မည့်အန္တရာယ်ကင်းသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်ဟုထင်ဆဲဆဲ သို့သော်၊ ၂ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ထားသူမိသားစုသို့သွားခဲ့သည်။ သူမအစ်မကိုကြည့်သောအခါဗီဒီယိုကိုမစဉ်းစားတော့ပါ။ အဲဒါကကျွန်မကိုနာကျင်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။
တစ်နေ့သို့မဟုတ်ထိုနောက်မှကျွန်ုပ်သည်အိမ်၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေ့မိပြီး doppelganger ဗီဒီယိုသို့ပြန်လာခဲ့သည်ကိုပင်သတိမထားမိမီ။ ငါထင်တယ် ... ကင်လုပ်ခိုင်း ... ဒီပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုစိတ်ထဲကထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အစ်မရဲ့အတွေးတွေကြောင့်ကျွန်မလုံးလုံးလွင့်မျောသွားခဲ့တယ်။ ငါရူးသွပ်အရူးဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ရက်အနည်းငယ်တစ်လျှောက်လုံးအတွေးများသည်ငါ့ခေါင်းထဲမှေးမှိန်သွားခဲ့သည်။ gosh ။ ငါသူမကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူမကကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုပါ။ ငါမှားသောအစ်မနှင့်အတူဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့် ပတ်သက်၍ စဥ်းစားရန်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါ။ နက်ရှိုင်းသောကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တပ်မက်သောစိတ်ကြီးကငါ့ကိုတက်ရှုပ်ထွေး။
ငါဒီအရာတွေနဲ့နောက်အပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဗီဒီယိုကိုထပ်မကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲက (အရမ်းလှတာပဲ) ဆက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ညမှာလိင်ဆက်ဆံတာ၊ ဗွီဒီယိုကိုစစဉ်းစားတော့တာပဲ။ အဲဒီတုန်းကသူမအစ်မကိုစဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကစပြီးအဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါအစ်မအနေနဲ့အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စံပြဗားရှင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ငါသွားမက်ဒေါနား / ပြည့်တန်ဆာရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းပစ္စယအပေါ်အပြည့်အဝရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရုန်းကန်မှုများသူတို့ကိုဆံ့ငါ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း, လ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်သွားနေခဲ့တယ်။ ငါလိင် (ငါ၏အပြဿနာတစ်ခုတည်းကိုသာကြောင့်) underwhelming ခဲ့အဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့ masturbating ထားရှိမည်။ ငါကဗီဒီယိုရှာဖွေတာကနေငါမူကားရံဖန်ရံခါပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ယခုအချိန်တွင်၏အပူထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အိမ်ထောင်ရေးအတွက်3လအတွင်းကျနော်တို့ကြေကွဲအမှတ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လိင်, ကိုယ့်တော့ဘူး။ ကျွန်မဘာမျှမခံစားခဲ့သည်။ ငါပင်ပန်းခဲ့ကြှနျုပျ၏မယားပြောပေမယ့်ငါခံစားခဲ့ရာသိတယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ကျွန်မအမှားအားလုံးမိုင်းခဲ့သည်ကိုသိလျှင်, သူသည်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နှင့်အလွန်အမင်းနာကျင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်ငါလွှတ်မဆိုမျိုး porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေမှကိုယ့်ကိုကိုယ်အားသစ္စာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာအစမှာအတော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအခုထိငြိမ်ဝပ်စွာမှတဆင့်လာကြပြီ, ငါ့ဇနီးနဲ့ငါ့လိင်ဘဝသည်ကြီး !! ငါအစ်မအကြောင်းကိုသုညစိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်နှင့်ငါပြန်သူမ၏နှင့်အတူတစ်ဦးနီးပါးအစ်ကိုကြားဆက်ဆံရေးရှိခြင်းမှဖြစ်၏။
ငါတကယ်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာက၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေစရာမလိုပါ၊ သို့သော်သင်သိသောတစ်စုံတစ်ယောက် (သင်ဖြစ်နိုင်သော) နှင့်တူသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတွေ့ပါကအလွန်ဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ သူတို့မလုပ်လျှင်ပင်၊ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သောလိင်ကျွန်အတန်းအစားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏အစစ်အမှန်လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
TL; DR အခုငါအရမ်းကောင်းနေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို porn / masturbating ကြည့်တာကိုရပ်လိုက်ရတယ်။ သင်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်များသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်မာရ်နတ်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုအစောပိုင်းထုတ်မထုတ်ပါကသင်၏အိမ်ထောင်ရေး / ဆက်ဆံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်သည်။
(ps ကျွန်ုပ်၏အဆက်မပြတ်လှည့်စားမှုများအတွက်စိတ်မကောင်းပါ။ ဤစာမူကိုကျွန်ုပ်မတည်းဖြတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကငါ့ကိုအသိပေးပါကွာဟချက်များကိုဖြည့်စွက်လိုပါက!
LINK - ငါ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ညစ်ညမ်းမှုကဘယ်လိုလွှမ်းမိုးသလဲ